Dhageyso oo Taliyaha Guutada 60-aad Axmed Maxamed Cali “ Afcadeeye oo Ciidamada ilaaliya Madaxtooyada u sharaxay qaabka loogu gudbi karo Gudaha madaxtooyada dalka | Somalisan.com kala soco wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya
Dhageyso oo Taliyaha Guutada 60-aad Axmed Maxamed Cali “ Afcadeeye oo Ciidamada ilaaliya Madaxtooyada u sharaxay qaabka loogu gudbi karo Gudaha madaxtooyada dalka
Axmed Maxamed Cali “ Afcadeeye “ Taliyaha Guutada 60-aad ee Ciidamada Madaxtooyada Soomaaliya ayaa Ciidamada ilaaliya madaxtooyada ugu baaqay iney muujiyaan asluub wanaag iyo dulqaad marka ay shaqada ku jiraan.
Waxa uu sheegay in Wasiirada iyo Xildhibaanada soo booqanaya Madaxtooyada qaranka iney si wanaagsan ula dhaqmaan oo aysan ku xadgudbin.
Waxa uu sheegay in sidoo kale Ciidamada loogu baahan yahay iney si degan u dhageystaan qeybaha kala duwan ee bulshada marka ay arrin ka soo yeeshaan Madaxtooyada.
Waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay iney si adag u baaraan ciidamada gaadiidka soo galaya Xarunta Madaxtooyada.
ayay ahayd markii Taliyaha Guutada 60-aad ee Ciidamada Madaxtooyada Soomaaliya Axmed Maxamed Cali “ Afcadeeye “ iyo Saraakiil kale ay tababar usoo xireen Ciidamada ilaalada ka ah Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.